5 Tips for Your iPhone Battery Drain Fast | Than Dana - Mobile & Tech
Home » Tools, Tips and Tutorials » သင့်ရဲ့ iPhone Battery အကုန်မြန်စေသည့် အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်
In Tools, Tips and Tutorials On April 8, 2018
ကျနော်တို့ နေ့စဉ်သုံးဆွဲနေကြတဲ့ Smart Phone တွေဟာ သုံးစွဲတဲ့အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Battery ရဲ့သက်တမ်းကလည်း အသစ်တုန်းကလိုမဟုတ်တော့ပဲ Battery အကုန်မြန်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ပုံမန်အားဖြင့် ဒီလို Battery အကုန်မြန်တာ အားမခံတာတွေဟာ ဖုန်းရဲ့သက်တမ်း ၁ နှစ်ခွဲ နှစ်နှစ်နီးပါးမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ တစ်နှစ်လောက် ဒါမှမဟုတ် (၈) လလောက်နဲ့တင် Battery ကုန်တာမြန်တာတွေ ဖြစ်လာရင်တော့ အောက်ကအချက်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် မလုပ်ဖို့အောက်ပါ5Tips for iPhone Battery Drain အက​ြောင်းလေးကိုပြန်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
1. Updating Your iPhone
iOS Update မြင့်ချင်းဟာလည်း သင့် Battery Life ကိုကုန်ဆုံးစေတဲ့အချက်ထဲကအဓိကအချက်ပါပဲ။ ဒါကတော့ Users တွေလည်း သတိထားမိမှာပါ။ iOS Version မြင့်လိုက်တိုင်း အရင် OS ထက်ပိုပြီး Battery ကုန်တာ အနည်းငယ်ပိုမြန်တာကို၊
ဒါပေမဲ့ iOS က Update မလုပ်လို့လဲမရဆိုတော့ Battery ကုန်တာမြန်နေတာကို သိသိကြီးနဲ့ခံနေရတဲ့ Apple Users တွေကတော့ Apple ကို Complaints တက်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ Complaints တွေကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်က Apple ကနေ Battery ဈေးနှုန်းတွေကို ထက်ဝက်လောက်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။
2. Background Apps (Recent) များမရှင်းခြင်း
Apps Recent များမရှင်းခြင်းနှင် Background Apps Refresh On ထားခြင်းဟာ Battery အကုန်မြန်စေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Apps တစ်ခုသုံးပြီးတာနဲ့ အဲ့ Apps ထည်းကထွက်ပြီး တခြား Apps တစ်ခုသုံးနေမယ်ဆိုရင် ခုဏကသုံုးခဲ့တဲ့ Apps ဟာ Background မှာ Run နေပြီးတော့ Battery ကုန်တာတွေ Cellular Data ပိုစားတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Apps တွေကိုသုံုးပြီးတိုင်း Recent Apps တွေကိုအမြဲတမ်းရှင်းတာတွေလုပ်ပေးပါ။ နောက် Setting > General > Background Apps Refresh ကကိုမလိုတဲ့ Apps တွေကို ပိတ်ထားတာတွေလုပ်ထားရင်တော့ Battery အကုန်မြန်တာသက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Location Services အမြဲဖွင့်ထားတာက Battery အကုန်မြန်စေတဲ့အချက်တွေထဲကပါပဲ။ Setting > Privacy > Location Services On ထားတဲ့အတွက် သင့်ဖုန်းဟာ ဘယ်နေရာရောက်နေတယ် ဆိုတာကို အမြဲတမ်း Location Update လုပ်ပေးနေရတဲ့အတွက် Battery Drain ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Setting > Privacy > Location Services အောက်က Apps တွေထဲမှာ ကိုအသုံးလိုမဲ့ Apps တွေကိုပဲ Location On ထားစေချင်ပါတယ်။
4. Bluetooth ကို အချိန်ပြည့်ဖွင့်ထားခြင်း
အမြဲတမ်း Bluetooth ဖွင့်ထားခြင်းဟာ Battery အကုန်မြန်စေပါတယ်။ Bluetooth ဖွင့်ထားခြင်းကြောင့် Bluetooth Setting ကနေအမြဲတမ်းအနီးအနားမှာရှိသည့် Bluetooth Devices များကို Searching လုပ်ဆောင်ရခြင်းကြောင့် Battery အကုန်မြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက် Cellular Data အစား Wifi ကိုသုံးခြင်း၊ ကို့ Location တွင်လိုင်းကောင်းသော Carrier ကိုသုံးခြင်းဖြင့် Battrey အကုန်မြန်တာကိုသက်သာစေပါတယ်။ တကယ်လို့သင်သုံးနေတဲ့ Carrier ဟာ သင်နေထိုင်တဲ့ Location အတွင်းလိုင်းမကောင်းလျှင် သင့် Smart Phone က Network Searching Process ကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပေးရသည့်အတွက် Battery အားအကုန်မြန်စေပါတယ်။
5. HavingaVery Bright Screen
Brightness ကိုအမြဲတမ်း အမြင့်ဆုံးထိတင်ထားတာကလည်း သင့်ဖုန်းရဲ့ Battery သက်တမ်းကိုတိုစေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Auto Brightness ကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သင့်ဖုန်းရဲ့ Notificaiton Center မှာရှိတဲ့ Noti တွေကိုလည်းပုံမှန်ရှင်းပေးခြင်းဖြင့် Battery အကုန်မြန်တာကိုသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ပြီးဖြည့်စွက်ပြောချင်တာကတော့ သင့်ဖုန်း Battery မှာ Low Mode ပြတာနဲ့အားချက်ချင်းသွင်းပါ။ ထို့နောက် အားသွင်းရင်းနဲ့ Online Game ဆော့ချင်းတွေကိုတတ်နိုင်သလောက် မလုပ်ပါနဲ့။ အားပြည့်တာနဲ့ချက်ချင်းအားသွင်းကြိုးဖြုတ်ပြီး အားသွင်းတာကိုတစ်ညလုံး သွင်းတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။
အခု iOS 11.3 မှာဆိုရင် Setting > Battery > Battery Health (Beta) ထဲဝင်ပြီးသင့် Phone Battery အခြေအနေကိုကြည့်နိုင်ပါပြီ (Only iPhone6to iPhone X)
သင့် Smart Phone Battery အကုန်မြန်စေသည့်အကြောင်းအရင်း (၅) ချက် ကိုသိပြီဆိုတော့ ဒီအချက်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် မလုပ်မိစေဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
Topics: iDevices iOS
Previous Post ကမ္ဘာကျော်ရူပဗေဒပညာရှင် (၇၆) နှစ်အရွယ် Theory Of Everything : Stephen Hawking ကွယ်လွန်
Next Post Battery Health (Beta) Function ဖြင့် သင့် iPhone Battery အခြေအနေစစ်ဆေးခြင်း
April 9, 2018 3550CommentsBy: Kyaw Hpone Naing